Nyochaa: "Ihe magburu onwe ya na snow", nke F. Javier Plaza | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Nyochaa: «Ihe magburu na snow», nke F. Javier Plaza dere
Ọnwa ole na ole gara aga ka m gwara gị banyere Magpie na snow, akwụkwọ mbụ site na F. Javier Plaza, bipụtara Hades akụkọ. Ọ bụ izu ole na ole kemgbe m gụchara ya. Ma ọ bụrụ na agbaghị m ume ịme nyocha ahụ tupu oge a, ọ bụ n'ihi na enwetabeghị m nke ọma na echiche na akụkọ a ahapụ m.
Magpie na snow Ọ na-eme ihe karịrị ụbọchị 7, na Paris kachasị nka na ngwụsị narị afọ nke XNUMX. N'ụbọchị ndị a, anyị ga-amata Camille, onye na-akwado ya, nwa okorobịa si n'ezigbo ezinụlọ nke chọrọ ịbụ onye na-ese ihe karịa ihe ndị ọzọ, mana ọrụ ezinụlọ ya anaghị eme ka ọ dịrị ya mfe. Anyị na-achọpụta onye ọ bụ, akụkọ ihe mere eme ya na nke ndị gbara ya gburugburu, nrọ ya, olileanya ya, na ebumnuche ya. Ma kwa iwe ya, njikọ ya, obi abụọ ya, ụjọ ya. Plaza batara n'uche Camille dị ka onye na-ese ihe, dịka nwoke, dị ka nwa nwoke, dị ka onye hụrụ n'anya, dị ka onye na-ese ihe, dị ka nwa okorobịa chọrọ ịlụ ọgụ maka ọdịmma ya iji wepụta nke ya, mana ọ ga-eme nke ọma.
M ga-ekwu nke ahụ Magpie na snow Obu akwukwo no na akuko dika akwukwo. Na onye mbu, Camille na-akọghachi ụbọchị ikpeazụ ya na Paris, tupu ọ laghachite n'ụlọ ezinaụlọ, ebe ọ ga-arụ ọrụ ya dị ka ọkpara, gụnyere ịlụ onye ọlụlụ.
Agbanyeghị, ihe na mbụ dị ka akwụkwọ edetu, obere nke nta ọ na-enweta ụdị ncheta ahụ, mgbe ọ malitere ịghọta na edere ya site n'ọdịniihu. Ma dịka onye na - agụ ya matara nke a, onye na - agụ ya nwere ike ịghọta na nrọ niile nke Camille nwere ike ịnọ naanị na nke ahụ, na nrọ, n'etiti ha, ịlaghachi Paris ọzọ n'oge opupu ihe ubi iji gosipụta ndị na-eche echiche na nhọpụta dị mkpa eserese.
Maka m obi abụọ ahụ, mmetụta ahụ ghọrọ ezigbo ihe mgbu. Nke mere na m mere ihe m na-emeghi na ndụ m. Akwụsịrị m ịgụ akwụkwọ a n'isiakwụkwọ site na ngwụcha ruo ọtụtụ ụbọchị n'ihi na enweghị m ike ịnagide ihe mgbu nke ịchọpụta na ngwụcha nke m tụrụ anya na ọtụtụ peeji ndị gara aga nwere ike ime.
Plaza jisiri ike mepụta agwa onye ọ dị mfe igosipụta ọmịiko. N'agbanyeghị na ọ bụ nwanyị na ọbụna ihu abụọ - n'ụzọ ọ na-esi ese ndị mmadụ oge ahụ, ọ nweghị ihe ọhụụ, n'aka nke ọzọ - Camille nwere nrọ ma na-alụ ọgụ maka ya. Ọ bụ ngwaahịa nke oge ya nke chọrọ ịpụ na ebu, mana nkwenye ya kwenyesiri ike na ọ ghaghị ịlụ ọgụ megide onwe ya. Ọrụ ndị ọzọ na ịdabere na onwe ya na-eme ka mgba nke uche sitere na ya nwee echiche na echiche na-adọrọ mmasị.
Parisian n'ike mmụọ nsọ
Javier Plaza bụ onye na-ahụ ihe osise n'anya. Mmetụta bụ ihe osise kachasị amasị ya. Inwere ike ihu ya. Mmasị nke na-apụta site na peeji nke Magpie na snow mgbe m na-akọwa eserese ma ọ bụ ihe nkiri nke otu n’ime ha kwuru banyere eserese, ajụrụ m onye dere akwụkwọ ahụ ma ihe osise ndị ahụ hà dị adị n’ezie.
Ma ọ bụghị. Ewezuga eserese Magpie na snow nke Monet, ole na ole bụ ezigbo foto na-kwuru na akwụkwọ akụkọ. Javier gwara m na ọ na-ekwu maka ihe osise ndị a na-eche n'echiche na-eche echiche banyere "onye na-ese ihe nwere ike ịmasị ọrụ ya", na ọ gbalịrị ịbanye n'isi ya dị ka ọ na-eme ya mgbe ihe mere ya ma ọ bụ na ọ hụrụ ihe ma chee "na ọ nwere ike inye maka ederede ederede ».
Enwere m mmasị na nkọwa ọ gwara m banyere agwa Camille na, ọ bụ ezie na ọ bụghị mmụọ nsọ ọ bụla sitere n'ike mmụọ nsọ, Plaza nyere ya aha ahụ maka ịkwanyere Camille Pisarro, otu n'ime ndị na-ese ya ọkacha mmasị. N'ezie, kwaaji kachasị amasị Plaza bụ Pissarro, Boulevard de Montmartre na ọdịda anyanwụ. Ma ọ bụ kpọmkwem na Montmartre ebe isi akụkọ na-ewere ọnọdụ.
Ọchịchọ ọzọ dị mkpa ịmata bụ mmụọ nke ndị edemede ndị ọzọ n'akwụkwọ a, bụ Yves na Victor, ndị ọmarịcha ihe osise ndị Camille metara enyi na ndị chọtara mmetụta maka ya. Plaza kwuru na Toulousse Lautrec sitere n'ike mmụọ nsọ Yves, n'agbanyeghị ndụ nke onye na-ese ihe ahụ, ọkachasị n'afọ ndụ ya, jọgburu onwe ya ma dịkwa egwu, ọ wepụrụ ụdị ọdachi ọ bụla na omume Yves iji mee ka ọ nwee ọ joyụ. Victor nwere àgwà Pisarro.
Ihe odide abụọ a soro Camille iji gosipụta mmadụ abụọ na-emegide onye omenkà. Yves bụ onye na-anọghị na onye bohemian nke oge ya nke na-adị ndụ naanị maka eserese na abalị. Víctor bụ onye dị nwayọ, onye na-ese ezinụlọ na-eche maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ahụ na-aga ma na-anọgide na ebube
Nke a na okwu a kwuru Yves ka Camille. Obi abụọ banyere ma Camille ga-eme ka nrọ ya mezuo abụrụla ihe doro anya mgbe Yves kwuru okwu ndị a. Ọ bụ ezie na onye sere ya wepụtara ahịrịokwu ahụ dịka onye achọghị ihe ahụ, n’etiti njakịrị na ịkwa emo, nke bụ eziokwu bụ na echiche a miri emi.
Mgbe m gabigara akpaokwu a bụ mgbe m matara nke ọma banyere ọdachi na-abịa: ọdịiche dị n'etiti ịgafe ndụ na ịnwụ, ma ọ bụ ibi ndụ na ịnọ na ncheta ruo mgbe ebighị ebi. Aga m echeta akwụkwọ a maka ọtụtụ ihe, mana ama m na echiche a ga-anọnyere m oge niile.
E nwere ọtụtụ ihe mere o ji baa uru ịgụ ya Magpie na snow, ma ọ bụrụ na m ga-ahọrọ naanị otu, ọ ga-abụrịrị ibi ahịrịokwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Nyochaa: «Ihe magburu na snow», nke F. Javier Plaza dere
Akwụkwọ mpịakọta ndị na-enyo enyo yiri: 'Shutter Island' na 'Line of ụzọ gbagọrọ agbagọ'